नेपालमा गरीबीको अवस्था र गरीबी घटाउने उपाय – Kakhara News
नेपालमा गरीबीको अवस्था र गरीबी घटाउने उपाय
काठमाडौं, २० पुस । गरिबी अभावको अवस्था हो । यसका स्वरूप र आयाम धेरै भए पनि जीवन निर्वाहका लागि आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चितिमा रहनु नै गरिबी हो । सामान्य अर्थमा जीवनयापनका लागी चाहिने आधारभूत आवश्यकताको अभाव भएको अवस्था नै गरिबी हो। गरिबीलाई निरपेक्ष र सापेक्ष रुपमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ । आधारभुत आवश्यकताहरु पनि पुरा गर्न नसकिने गरिबीलाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ । निरपेक्ष गरिबीलाई नाप्नका लागि गरिबी रेखा आयस्तरको सहायता लिईन्छ । जस्तैः विश्वव्यापी मान्यताका अनुसार निरपेक्ष गरिब त्यस्तो गरिब हो जसको प्रतिदिन आम्दानी १.२५ डलर भन्दा कम हुन्छ । जसका आधारमा नेपालमा गरिबीको दर २८.६ प्रतिशत रहेको छ । निरपेक्ष गरिबी जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक न्यूनतम क्षमता नभएको अवस्थालाई बुझाउछ । सापेक्ष गरिबी भनेको आधारभुत आवश्यकताको परिपूर्ति हुने नहुने भन्दा पनि आय वितरण सँग सम्बन्धिच हुन्छ । यो त्यस्तो अवस्था हो जहाँ एउटा समुह वा समुदायको साधनहरु वा आम्दानी अर्को समुदाय वा विश्वको औसतको तुलनामा कम हुन्छ । यो धारणा विकसित देशहरुका लागि बढी उपर्युक्त हुन्छ । ती देशहरुमा देशको मध्यम आम्दानीस्तर भन्दा कम आम्दानी भएको अवस्थालाई सापेक्षिक गरिबी भनिन्छ । समाज एवं समय सापेक्ष निर्धारण गरिएका जीवनस्तरका आधारहरु पुरा गर्न सक्ने क्षमता नभएको अवस्था सापेक्ष गरिबी हो । सापेक्ष गरिबीले तुलनात्मक गरिबीलाई चित्रण गर्दछ । उच्च तह वा मध्यम तहका मानिसको तुलनामा तल्लो आयस्तर भएका मानिसहरुको आयस्तर वा जीवनस्तर कस्तो र फरक छ भनी सापेक्ष रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।
यसरी आर्थिक, सामाजिक,मानवीय, शैक्षिक आदि दृष्टीकोणबाट पछौटेपन, श्रोत साधन तथा अवसर र रोजाइहरुबाट बञ्चिती एवं पहुँच विहिनिताको अवस्था नै गरिबी हो । गरिबीले गर्दा नै गरिबीको बिस्तार हुन्छ । गरिबीका कारण देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधानहरुको समुचित परिचालन गर्न देशको अनुपात्दक जनसङ्ख्यालाई उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्न वाधा उत्पन्न हुन्छ । हाल नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याः १८.७ प्रतिशत रहेको छ । बहु आयमिक गरिबीमा रहेको जनसंख्याः २८.६ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वृद्धि र विकास नहुनुको मुख्य कारक तत्वको रुपमा गरिबी नै हो । गरीबी कारणले गर्दा नै विश्वका ठुला ठुला आर्थिक सामाजिक राजनैतिक आन्दोलन भएका छन् । यसरी विकशित तथा विकासोन्मुख देशमा गरिबी समस्या परिणात्मक तथा गुणात्मक दुवै रुपमा रहेको हुन्छ ।
पुँजीको अभाव हुनु, बेरोजगारी बढ्नु, अशिक्षा, तिव्र जनसंख्या वृद्धि, असमानता, ग्रामिण बसोबास, राजनैतिक अस्थिरता, परम्परागत कृषि प्रणाली, उपर्युक्त सरकारी नीतिको अभाव, .न्यून औद्योगिकरण, धार्मिक मूल्यमान्यता, प्रतिभा पलायन, व्यवसायिक स्वरोजगार मूलक सीपको अभाव, श्रोत साधन तथा अवसरहरुको असमान वितरण, कमजोर शैक्षिक अवस्था, न्यून मानव विकास, कमजोर पूर्वाधार विकास, भ्रष्टाचार बढ्नु र सुशासन कायम गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय आयको समुचित बाडँफाड गर्न नसक्नु, सामाजिक असमानता, न्यून सामाजिक-आर्थिक पूर्वाधार, श्रोत साधनको असमान वितरण जस्ता गरीबीका कारणहरु हुन । यिनै कारणहरूलार्इ मनन गरी कार्वान्वयन गर्न सकेमा गरीबी घट्ने छ । अथवा यी समस्याको समाधान गर्न सकेमा गरीबी न्यूनिकरण हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
गरीबी निवारणका लागि नेपाल सरकारबाट धेरै प्रयास पनि भएका छन् । जसमा योजनाबद्ध विकासमा गरीबी घटाउने लक्ष्य लिर्इदै आएको छ । नेपालमा रहेको चरम गरीबीलाई कम गर्न तथा लोकतान्त्रिक, न्यायिक, समतामूलक एवं दिगो समाज निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गरीबी निवारण कोष स्थापना गरेको छ । यसले ग्रामीण गरीबहरूको बसोबासको अवस्था तथा जीवनचर्यामा सुधार तथा सशक्तीकरण गर्ने प्रयास गर्दछ । गरीबी निवारण गर्न विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको पार्इन्छ । यही अवधिमा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम लगायतले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गरिरहे । कार्यक्रममा सिर्जनात्मकताको अभाव, कमजोरीको निरन्तर पुनरावृत्ति, नीतिगत अस्पष्टता जस्ता कमजोरीका कारण ती कार्यक्रममाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा पुगेको छ । सरकारले गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई अझ बढी समन्वय र प्रभावकारी बनाउन गरिबी निवारण मन्त्रालय नै खडा गरेको छ । मन्त्रालयले हाल देशभरका गरिबको पहिचान गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । २५ भन्दा बढी जिल्लामा गरिबीको परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । विगतमा विभिन्न सन्दर्भमा सुरू गरिएका एकै प्रकृतिको गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूको समायोजन, व्यवस्थापन र ढाँचा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ ले गरिबी निवारणलाई तीनै तहको सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र समावेश गरेको छ । सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहभागितामा मात्र गरिबी निवारणका समग्र कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन सक्छन् । गरिबी निवारण मन्त्रालय र गरिबी निवारण कोषजस्ता केन्द्रीय संरचनाले नीति निर्माणको, अनुसन्धानपछि प्रभावकारी परियोजनाको निर्माण गर्न सक्छन् भने प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।
दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा विश्वलाई स्वस्थ, सुशिक्षित, सुरक्षित, सुशासित, सुसंस्कृत समाज बनाउने प्रतिबद्धतामा राष्ट्रिय सरकारहरूलाई घच्घच्याइरहेको छ । त्यस अवस्थालाई राष्ट्रसङ्घले ‘हामीले चाहेजस्तो विश्व’ भनेको छ र नेपाललगायत सबै मुलुक हामीले चाहेजस्तो विश्व प्राप्तिको अभियानमा कार्यक्रम, नीति तथा योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । गरिबी निवारण त्यसको पहिलो आधार हो ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवाती दिनदेखि नै गरिबी निवारणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आए पनि दशौँ योजनाले गरिबी निवारणको एकल उद्देश्य लिएपछि गरिबीलाई बहुआयामिक परिभाषा गरी गरिबी निवारणका लक्षित कार्यक्रम घनीभूत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइँदै आएको छ । गरिब लक्षित कार्यक्रम, अनुदान कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक परिचालन कार्यक्रम र मानव स्रोत विकास कार्यक्रमका कारण ७औँ योजनाको अन्त्यमा ४९ प्रतिशत रहेको गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या १५औँ योजनाको सुरुमा १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ तर गरिबीको सघनता भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समुदायमा असमान रूपमा छ ।
१४औँ योजनाले उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा द्रुत गरिबी न्युनिकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । यस योजनाले गरिबिको रेखा मुनी रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएकोमा पन्ध्रौँ योजनाको अवधिसम्म आइपुग्दा १८. ७ प्रतिशत हुन पुगेको छ । चालु १५ औँ योजनाले दीर्घकालिन सोच सहित वि.सं. २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयमिक गरिबीको अवस्थाबा मुक्त गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या वि.सं. २१०० सम्म ० प्रतिशतमा झार्ने दिर्घकालिन लक्ष्य लिएको छ । चालु आवधिक योजना समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को दीर्घकालिन सोच हासिल गर्ने आधार योजनाको रुपमा तयार गरिएको छ ।
( लेखकः नेपाल सरकारका उपसचिव एवं सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।­)